Oganda: Mahatsiaro Ny Fipoahana Baomba Tamin’ny 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2012 3:01 GMT
Roa taona katroka izao no lasa hatramin'ny nahafaty ireo olona 80 tamin'ny fipoahana baomba tao amin'ny Rugby Club Kyaddondo sy trano fisotroana tao aminà tanàna Etiopiana ao Oganda. Ireo olona rehetra ireo dia nandeha nijery ny lalao famaranana ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany natao tany Afrika Atsimo. Satria sambany no mba nampiantrano ity fifaninanana ity i Afrika, tsy andrin'ny olona ny hahita ny lalao famaranana izay nihaonan'i Pays-Bas sy Espaina. Efa nanakaiky ny tamin'ny 12 ora alina tamin'ny fotoana nipoahan'ireo baomba, nahafaty olona maherin'ny 70 teo no eo ary hafa maro naratra mafy.
Takelabato Fahatsiarovana ao amin'ny Kyaddondo Rugby Club
Tamin'ity taona ity dia maro ireo foibem-pampahalalam-baovao nanome voninahitra sy haja ho an'ireo Ogande namoy ny ainy tamin'iny fanafihana tsy am-piheverana iny. Ireo Ogande hafa manerana ny tany dia nandefa hafatra tao amin'ny Facebook sy tao amin'ny Twitter koa tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #WeRememberJuly11, na #TadidinayJolay11:
@beewol no namaky izany rehetra izany tao amin'ny twitter nilaza hoe :
@beewol: #WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#WeRememberJuly11…#TadidinayJolay11
@beewol: R.I.P (Mandria am-piadanana) ry mpitia fanatanjahantena maty tamin'io andro io, 2 taona lasa izay ‪#WeRememberJuly11
@pkahill nahatsiaro ny namany:
@pkahill: #WeRememberJuly11‬ tsy nànana vatoaratra izy ka dia niandry ireo namany teo amin'ny toeram-pivarotana, namela ny namany iray tany anatiny, dia nipoaka ny baomba 1/2
zazavavy iray mitazona labozia nandritra ny fotoana fahatsiarovana
@pkahill: #werememberjuly11‬ mivavaka ho an'ny fanahin'ireo malalantsika nafoy, ho fiononan'ireo havan-tiany&fanantenana fa ho sitrana miaraka amin'ny fotoana ny ratram-po noho ny famoiza-malala 1/5
@ssmusoke: Vavaka ho an'ireo rehetra namoy aina sy ny havan-tsy foy tao anatin'ilay fanafihan'ny mpampihorohoro, mahereza ary tohizo ny làlana ‪#WeRememberJuly11‬ ‪#Uganda
@dfkm1970 nivavaka ihany koa :
@dfkm1970: Ho an'ireo rahalahy sy anabavintsika rehetra namoy ny ainy, mandria am-piadanana. Ho an'ireo rehetra naratra sy tra-pahoriana, atrakao ny loha ! ‪#WeRememberJuly11
@lubegapaul niteny hoe :
@lubegapaul: #WeRememberJuly11‬ Ho an'ireo izay nidonan'iny vono olona iny, ao am-ponay ianareo. Efa any amin'Andriamanitra ireo rahalahy sy anabavy nafointsika.
@dukedanny4 niteny koa hoe :
@dukedanny4: #WeRememberJuly11‬ Ao an-tsainay sy ny vavakay. RIP (Mandria am-piadanana)
@EKKYmusiq mihevitra fa Andriamanitra no tompon-kevitra farany amin'ny zavatra rehetra :
@EKKYmusiq: #werememberjuly11‬ Voninahitra ho an'Andriamanitra Avo indrindra, azy ny famaliana.
Fotoana fohy taorian'ilay fipoahana tamin'ny 2010.
Sary : ugandansatlarge.blogspot.com
@primagaba naniry hahalala ny misy ireo sisam-paty sy naratra tamin'iny fotoana iny:
@primagaba: satria #TadidinayJolay11 ‪#WerememberJuly11‬ Any ‪#Somalia‬ ny firotsahana an-tsehatry ny governemanta nefa mba ahoana ny amin'ireo sisampaty ? Aiza izy ireny? Ahoana ny fiatrehany ny fiainany?
@MTNUGANDACARE nibitsika hoe :
@MTNUGANDACARE: “Mamela ratram-po tsy hay sitranina ny fahafatesana, mamela fahatsiarovana tsy azon'iza na iza angalarina ny fitiavana” – ‪#WeRememberJuly11